Global Voices teny Malagasy » Famatsiana Vola Ny Toekarena : Rehefa Ny Fironana Amin’ny Tsenam-bola No Manavotra Ny Tsy Vitan’ny Banky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Aogositra 2014 10:19 GMT 1	 · Mpanoratra Mathieu Carrere Nandika avylavitra
Sokajy: Fanadihadiana Tranga, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
« Toy ny menaka mandry anaty rà – “cholestérol” – ny resaka fitantanam-bola, misy ny tsara sy ny ratsy » . Raha vao hoe hiresaka rafitra banky, tsy mitsitsy mihitsy i Arnaud Montebourg, Minisitry ny Toekarena. Raha tsy ampy moa ilay fampitahàna, manilika soa aman-tsara any amin'ireo banky izy mba hanazavàny ny fihitsohan'ny toekarena frantsay. Tsy misy mihitsy hafatra tonga dia mivantana niriany halefa ho an'ireo banky ireo tahaka ilay hafatra nalefany tamin'ny Aprily 2014 nandritry ny fitsidihany ny orinasa Clauger, misahana ny resaka fampangatsiahana indostrialy, tao Brignais, akaikin'i Lyon.
Tsy diso ilay minisitra ao anatin'izany zava-misy izany. Ny 3 janoary 2014, nanambara ny fijotsoan'ny fampindramam-bola ho an'ny sehatra tsy miankina  hatrany amin'ny 2,3 % isan-taona ireo antontan'isa avy amin'ny Banky Foibe Eoropeana (BCE). Tarehimarika manahirana ka mahatonga ireo mpahay toekarena hihetsika : « Ny tena manahirana dia izao, tsy misy marika mihitsy maneho hoe mety hitsimbadika io fironana eo amin'ny resaka fampindramana vola ataon'ny banky io ho an'ireo orinasa anatin'ny faritra Euro, izay mampitombo ny tsindry atao amin'ny BCE mba hihetsehany », hoy ny nambaran'i Howard Archer, lehiben'ny mpahay toekarena mitarika ny IHS Economics, sampana Eoropa.
Na, safidy iray hafa, mbola ny fampindramana vola hatrany no ho fanina . Izay mihitsy moa no efa vinavinain'i Gilles Moec, tale mpiara-mitantana ny fikarohana ara-toekarena ao amin'ny Deutsche Bank, « Raha izay hita tany Danemark, tsy nampidina ny zanabola fanomeny ny vola tahiry ny banky, olana teknika saro-bahàna, fa kosa nampitombo ny zanabola amin'ny vola indramina. Tamin'ny alàlan'io fomba io no nanenjehany ny elanelana veriny tany amin'ny zanabola amin'ny vola tahiry ».
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/09/62954/
 « Toy ny menaka mandry anaty rà – “cholestérol” – ny resaka fitantanam-bola, misy ny tsara sy ny ratsy »: http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20140422.REU3600/arnaud-montebourg-presse-les-banques-de-preter-aux-pme-tpe.html
 nanambara ny fijotsoan'ny fampindramam-bola ho an'ny sehatra tsy miankina: http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-credit-au-secteur-prive-accentue-son-recul-dans-la-zone-euro-899828
 mbola ny fampindramana vola hatrany no ho fanina: http://www.bfmtv.com/economie/baisse-taux-bce-consequences-argent-788357.html